विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, कस्तो छान्ने जिवनसाथी ? – onlinedarpan:
Posted on December 7, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 53 Views
Share210TweetGoogle+Pin0210sharesमन्दिरमा धेरै चडाइने वस्तुहरु मध्येमा सबैभन्दा बढी नरिवल प्रयोग गरिन्छ। नरिवललाइ संस्कृतमा नारिकेल भनिन्छ। श्रीफला पनि भनिन्छ नरिवललाइ जसको अर्थ हुन्छ ‘शुभ फल’। भगवानलाइ चढाउनको लागि राम्रो अनि उच्च फल मानिन्छ त्यसैले त महाफला पनि भनिन्छ यो फललाइ। उत्पति कसरी भयो ? वैदिक कथाहरुमा यसको उत्पतिको बारेमा राम्रोसंग उल्लेख गरेको पाइदैन। तर पुराण अनि महाकाव्यहरुमा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…